Mogadishu Journal » David Alaba ayaa ka tagaya Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedkaan
David Alaba ayaa ka tagaya Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedkaan
Kooxaha ugu caansan Yurub ayaa heegan buuxa gali doona ka dib markii David Alaba uu xaqiijiyay inuu noqon doono xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay isagoo ah ciyaaryahan Bayern Munich ah.
David Alaba ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo Bayern Munich marka qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Daafaca boosaska badan ee Alaba ayaa soo maray da 'yarta Bayern laakiin wuxuu soo gabagabeyn doonaa 13 sano oo uu la joogay kooxda ka dib xilli ciyaareedkii 2020-21.
28 jirkaan ayaa ku dhawaaqay go'aankiisa shir jaraa’id Talaadadii, in kasta oo uusan shaacin halka uu ku wajahan yahay.
Alaba ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo Real Madrid, halka kooxaha waa weyn ee Premier League Liverpool, Manchester City iyo Chelsea sidoo kale lala xiriiriyay inay xiiseynayaan.
"Waxaan go'aansaday aniga shaqsiyan inaan sameeyo wax cusub xilli ciyaareedkaan ka dib," ayuu Alaba ku yiri shirkiisa jaraa'id.
“Waan ka tagi doonaa kooxda mana aheyn go’aan sahlan, waxay aheyd wax aad u adag maxaa yeelay waxaan halkaan joogay 13 sano runtiina waxaan la socdaa kooxdaan, waa mid ku dhow qalbigeyga aadna waan ugu mahadcelinayaa kooxda wax walba. .
Ma aanan go’aansan kooxda aan aadayo weli. Tani waxay dhici doontaa mustaqbalka.
13-kii sano ee aan soo maray daqiiqado aad u qurux badan, seddexleydii 2013, kulankeygii ugu horeeyay, seddexleydii xilli ciyaareedkii hore. Kuwani waa daqiiqado aad u adag in la sharaxo.
"13-kii sano ee iga dambeeyay way adagtahay in ereyo lagu soo koobo. Waxay ahayd waqti aan caadi aheyn, qurux badan oo xamaasad leh runti aad ayaan u mahadcelinayaa."
Alaba wuxuu kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay kulan DFB-Pokal ah oo uu la yeeshay Greuther Furth bishii Febraayo 2010, isagoo noqday ciyaariyahankii ugu da'da yaraa kooxda ee waqtigaas wuxuuna gool u dhigay Franck Ribery daqiiqad gudaheed markii uu garoonka soo galay.
Ninka reer Austria wuxuu jiray 17 sano, todobo bilood iyo 18 maalmood markii uu saftay kulankiisii ​​ugu horeeyay, laakiin Jamal Musiala ayaa haatan ah ciyaar yahanka ugu da'da yar Bayern.
Alaba ayaa u saftay 415 kulan kooxda Bavaria, isagoo dhaliyay 33 gool isla markaana caawiyay 44 kale tartamada oo dhan.
Waxa uu ku adkaystay in xiriirka uu la leeyahay Bayern uu wali xoogan yahay isla markaana uu diiday in lacagtu ay tahay waxa uu ku dhiirrigelinayo inuu baxo inkastoo markii dambe ay noqotay gorgortanka qandaraaska dadweynaha.
"Maya [ma ahayn mid dhaqaale]," ayuu yiri Alaba. Waxaan hayaa afar, shan, lix, todobo sano waana taas wixii aan ka fikiray. Waa maxay tillaabada xigta ee noqon doonta xirfadeyda? Taasi waa waxa aan ku saleeyay go'aankeyga.
Gudaha gudahiisa marwalba xiriir wanaagsan ayaan lalahaa dadka mas'uulka ka ah walina waan sameeyaa. Naadigan waa qoyskeyga.
“Kama aanan walwalin arintaas [qandaraaskeyga marka lala barbardhigo saaxiibaday waayeelka ah] gabi ahaanba. Weli waxaan yeelanay wadahadalo dhowr ah kadib ka noqoshada qandaraaska
“Dabcan horumar ayaa jiray xaaladuna wey isbadashay, laakiin waxaan go’aansaday waxa aan doonayo in wadadaydu noqoto.
Iraqi armed group vows more attacks on ‘American occupation’
Ciidamada Maraykanka oo qabtay hub qarsoodi loo soo gelineyay Somalia (Sawirro)